Moya China Gauze Umqhaphu utyando igauze yonyango igauze roll ifektri yonyango kunye nababoneleli |Zhongxing
Ukulahlwa kweNtsholongwane yoNyango ...
Uqhaqho lonyango lweGauze Umqhaphu...
I-Gauze i-cotton pads ayinyumba
Igauze Umqhaphu igauze yonyango yotyando roll igauze yonyango emhlophe
IIBHANDJI ZEGAUZE ZONYANGO
Ubukhulu: 2', 3' 4' 6'
Indawo yeSicelo: Izinto zoNyango kunye neZincedisi: Utyando, iNkxaso eZinzileyo, uLungiso lweLungu njl.njl.
Ixesha lokuphelelwa : iminyaka emi-3
OEM OEDER YAMkelwe
Xabiso:Sithembisa amaxabiso ethu ngawona asezantsi kwifayile efanayo xa kuthelekiswa nabanye ababoneleli
Into I-Gauze Bandage
Izinto eziphathekayo I-Gauze
Umhla wokuzisa Iintsuku ezingama-20
Iimpawu Uluhlu olubanzi lokusetyenziswa: Uncedo lwenqindi olungxamisekileyo kunye nokulinda ngexesha lemfazwe.Zonke iintlobo zoqeqesho, imidlalo, ukukhuselwa kwezemidlalo.Umsebenzi wentsimi, ukhuseleko lokhuseleko emsebenzini.Ukuzikhathalela kunye nokhathalelo lwempilo yosapho.
Inzuzo I-elasticity enhle ye-bandage, iinxalenye ezidibeneyo emva kokusetyenziswa kwemisebenzi ngaphandle kwezithintelo, akukho kuncipha, akuyi kuthintela ukujikeleza kwegazi okanye ukuchithwa kweendawo ezidibeneyo, izinto eziphefumulayo, kulula ukuthwala.
Ubungakanani QTY/CTN UBUKHULU be-CTN
5cm*4.5m 12rolls/dz, 200dz/ctn 52*26*42
7.5cm*4.5m 12rolls/dz, 100dz/ctn 39*26*42
10cm*4.5m 12rolls/dz, 100dz/ctn 52*26*42
15cm*4.5m 12rolls/dz, 100dz/ctn 62*32*42
Sinesithembiso esithile kubathengi bethu
1.Sithembisa umntu wethu wokuthengisa uhlala e-intanethi kwi-Golabso, Skype, njl.Ukuze kulungiswe iingxaki zabathengi ngexesha.
2.Sithembisa umntu wethu othengisayo uya kuphendula imibuzo yabathengi kunye nee-imeyile kwiiyure ezili-12,
3.Sithembisa ukuba siya kuthumela imifanekiso ngexesha lawo onke amanyathelo emveliso kubathengi bethu, ukwenzela ukuba baxelelwe iimeko zamva nje zee-odolo zabo.
4.Sithembisa ukuba siya kulandela impendulo yabathengi emva kokuba befumene iimpahla zethu.Kuzo naziphi na iingxaki ezisemgangathweni, kufuneka sinikeze abathengi isisombululo esanelisekileyo ngexesha.
I-5.Soloko isampuli yangaphambi kokuveliswa ngaphambi kokuveliswa kobuninzi;
6.Soloko uhlolo lokugqibela phambi kokuthunyelwa;
Umbuzo: Ngaba ungumenzi onomzi-mveliso wakho?
A: Ewe, kunjalo!singumenzi.
Umbuzo: Ngaba sinokuba nelogo yenkampani yethu kwibhokisi / ibhegi?
A: Ewe, unako, inkonzo ye-oem iyafumaneka.
Q: Inkonzo yeesampuli zasimahla?
A: Ewe, sinokunikezela ngenkonzo yesampulu yasimahla (iimveliso eziqhelekileyo), ukuba i-qty ingaphezulu kwe-5 pcs, kunye nomrhumo ocacileyo wedwa.
Umbuzo: Unjani umgangatho?
A: Fumana isatifikethi se-ISO, CE.
Umbuzo: Yeyiphi indlela yokuhlawula owamkelayo?
A: Samkela iT/T, L/C, PayPal, ucingo, kunye nezinye ezingakumbi njengoko umxhasi ufuna.
Ngaphambili: I-Gauze i-cotton pads ayinyumba
Okulandelayo: Iimaski zobuso ezilahliweyo ezi-3 ze-ply
Uncedo lokuqala lweGauze Roll
IGauze yezoNyango eLahliweyo yeCopmress yeCotton Gauz...
Mask Njengobuso, Iimaski ezi-3 eziLahlwayo ngeFda, 3 Gcoba iMaski yoBuso eLahliweyo, Umsebenzi Wemaski, Ukulahlwa kweHalf Mask Respirator, Ffp1 Imaski elahlayo,